အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အီတလီဘောလုံးကစားသမားများ အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Emer"။ ကျွန်ုပ်တို့၏အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား Off-စေးအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကစားသူ၏စတိုင်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့အီမာဆန် Palmieri ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
အီမာဆန် Palmieri dos Santos, အီမာဆန် Palmieri အဖြစ်လူသိများသို့မဟုတ်ရိုးရိုးအီမာဆန်ဟာဆန်းတို့စအတွက် 3rd သြဂုတ်လ 1994, ဆောပိုလို, ဘရာဇီးတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ သူကသူ့အီတလီမိခင်သင်လို့ရတယ် Palmieri နှင့်ဘရာဇီးဖခင် Reginaldo Alves dos Santos မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
အီမာဆန်ကသူ့မိခင်ရဲ့အခြမ်းအပေါ်အီတလီမျိုးရိုးရှိပြီးမတ်လ 2017 ကတည်းကအီတလီနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့အစ်ကိုနှင့်အတူကြီးပြင်း, Giovanniလည်းသူ့ကိုတူသောပြန်ထွက်ခွာကစားမယ့်ဘောလုံးသမားသူသည်။ သူ 15 နှစ်အရွယ်မှာကတည်းကအီမာဆန်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးတစ်ဦးကိုနှစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူကလူငယ်စနစ်ကမှတဆင့်သူသည်ထိုသူ၌ကျေးဇူးတင်စကားကလပ်ရဲ့ဘောလုံးအဆင့်၏အများဆုံးထိပ်တန်းအဆင့်အထိကြီးထွားလာ, ပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်ပုံမှန်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိစတင်တည်ထောင်ခဲ့သော 16 အားဖြင့်လာမယ့်ပြီးနောက် 18 ၏အသက်အရွယ်မှာဆန်းတို့စသည်မိမိပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ ကင်းထောက်ဆန်းတို့စ U2013 ဘက်များအတွက် 20 Copa Sao Paulo က de Futebol အငယ်တန်းအနိုင်ရအပြီးကတည်းကငါးမန်းကဲ့သို့သူ့ကိုဝိုငျးစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုဥရောပခရီးဖွဲ့သော Palermo ကင်းထောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အီတလီခြမ်းသည်မိမိရွေးချယ်မှုတိုင်းပြည်ကနေကြွလာသောသူသည်သူ၏မိခင်မှကျေးဇူးတင်စကားမှတဆင့်သို့ရောက်ကြ၏။ အီမာဆန်ကသူ့တိုးချဲ့မိသားစုမှပိုပြီးနီးကပ်လာရဖို့ကြောင့်အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဝယ်ဖို့တစ်ခု option ကိုအတူ 2014 / 15 ရာသီအတွက်ချေးငွေအပေါ်သူ့ကို ယူ. အဘယ်သူသည်အီတလီကလပ် Palermo ။ ကံမကောင်းစွာပဲထွန်းလင်းရန်သူ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအနည်းငယ်တို့ဝေးများအကြားနှင့်ပဲကိုးပွဲကလပ်သဘောတူညီချက်အမြဲတမ်းအောင်၏ထို option ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဘူးအောင်ပြီးနောက်။
သူတို့က 21 / 2015 ရာသီအတွက်ချေးငွေအပေါ်ထို့နောက်-16 နှစ်အရွယ်ကိုယူသကဲ့သို့, Palermo ရဲ့အရှုံးရိုးမားရဲ့အမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာလူးကပ်စ Digne တစ်ခုခွဲအဖြစ် Stadio Olimpico မှာသူ၏ပထမဦးဆုံးရာသီကုန်ဆုံးကား, မိမိချေးငွေသဘောတူညီချက်ကိုနောက်ထပ်ရာသီအတွက်တိုးချဲ့ရှိသည်ဖို့အလုံအလောက်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောပြသခဲ့သည်။ ဤသည်လာသောအခါခဲ့သည် အန်တိုနီယိုအဆက်ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအတွက်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ အဆိုပါအရာကြွင်းလေသူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
ဒါဟာမေတ္တာ၌ကရြောကျဖို့အားလုံးကိုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်နှင့်တစ်ဦးဘဝကိုစီစဉ်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏လေဘွေ၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရ 'ထာဝရအတူအကွ'။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးဆယ်ကျော်သက်ခဲ့ကြသည်ကတည်းကသူ့ရဲ့ကလေးဘဝရည်းစား, Isadora Nascimento နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီးခဲ့သူအီမာဆန် Palmieri ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အီမာဆန်ဘရာဇီး၌သူ၏ရေရှည်ရည်းစား Isadora Nascimento တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, နှင့် pair တစုံအစဉ်အဆက်ကတည်းကအတူတကွခဲ့ကြပြီ။ မှာဘောလုံးပရိသတ်များသူမကအီမာဆန် play စောင့်ကြည့်အလွန်အသံရရှိသွားတဲ့ဝန်ခံသူမီး Latina, သတိထားမိဖို့ကအလွန်လွယ်ကူတွေ့။
သူမသည်ယခင်က said: ငါဂိမ်းကိုသွားသည့်အခါ "ငါသည်ခပ်သိမ်းသောငါအရူးပေါ့, ငါ့အသက်တာ၏မေတ္တာကိုကျေးဇူးတင်အလွန်ခိုင်ခံ့တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါစောင့်ကြည့်ဖို့သိပ်ဘောလုံးကြိုက်တယ်ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ "
နီးပါး 200,000 Instagram ကိုနောက်လိုက်ရှိပြီးမှန်မှန်အလွန်မေတ္တာ၌များများစားစားနဲ့သူမရဲ့လူသားရဲ့အောင်မြင်မှု၏မာနထောင်လွှားဖြစ်ပေါ်လာသောမိမိအသက်တာ၏မေတ္တာများ၏ရုပ်ပုံများကိုရေးသားသူကိုအီမာဆန်။
တခါအီမာဆန်ရဲ့ photo စကားပုံအပေါ် commented Isadora: "သူကအရမ်းချိုမြိန်အလွန်ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ သူကအမြဲအံ့သြဖွယ်များငါဖွစျနိုငျယုံကြည်ဘယ်တော့မှစေသည်များနှင့်အလွန်ကောင်းစွာငါ့ကိုဆကျဆံ, ငါ့ကိုရန်လှပသောအမှုအရာအမိန့်တော်ရှိ၏။ သူကငါနဲ့ငါ့မိသားစုမှယဉ်ကျေးပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါသင်, အီမာဆန်ခစျြလိမျ့မညျ! "
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
အီမာဆန် Palmieri သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
အီမာဆန် Palmieri ရဲ့အားသာချက်များ: သူဖန်တီးမှုအသည်းအသန်, ရက်ရက်ရောရော, နွေးနှလုံးနှင့်ချိုသောဖြစ်ပါတယ်။
အီမာဆန် Palmieri ရဲ့အားနည်းချက်များ: သူသည်မာနထောင်လွှားခေါင်းမာ, Self-ဗဟိုပြု, ပျင်းရိခြင်းနှင့်တရားရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုအီမာဆန် Palmieri ရဲ့အကြိုက်: ပထမဦးစွာပယ်သူ Isadora နှငျ့သူ၏ဆကျဆံရေး likes ။ Emer ကိုလည်း Isadora ဘို့စျေးကြီးသောအရာတို့ကိုမဝယ်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်စရာရှိခြင်း, အားလပ်ရက်ယူပြီး, သူ့ပြဇာတ်ရုံချစ်တော်မူ၏။
အဘယ်အရာကိုအီမာဆန် Palmieri ရဲ့နှစ်သက်ရာ: ခက်ခဲအဖြစ်မှန် facing, လျစ်လျူရှုခံများနှင့်တကွရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့အကုသခံရဘူး။
သူဖြစ်သော်လည်းနေဆဲလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အီမာဆန်သဘာဝမွေးဖွားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုအများအပြားမှမသိနိုင်ပါဘူး။ သူသည်အံ့သြဖွယ်ဖန်တီးမှု, Self-ယုံကြည်မှု, လွှမ်းမိုးနှင့်ခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ အီမာဆန်သူတို့မှကျူးလွန်အသက်တာ၏ဆိုဧရိယာထဲမှာချင်ဘာမှအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့သည်။ မိမိအဖို့တိကျတဲ့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ် "တောတွင်း၏ရှင်ဘုရင်" အခြေအနေ။
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -နေမာနှင့်အတူကစား
ဟုတ်ပါတယ်, အစောပိုင်းကကပြောသည်အဖြစ်အီမာဆန် sau Paulo, ဆန်းတို့စတှငျမှေးဖှားနှင့် 2009 မှာ set up လုပ်ဆန်းတို့စလူငယ်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သင်သိသလား? ... သူဟာကလပ်နှင့်အတူခြောက်နှစ်ကြာအောင်နှင့်အတူကစား နေမာ အဲဒီမှာသူ့အချိန်ကာလအတွင်း။ ထိုအချိန်မှစ. အီမာဆန်ဘရာဇီးရွှေကလေးကနေအရာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုတက်ခူး။
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
အီမာဆန်ဘောလုံးနောက်ခံတစ်ခုအထက်လူလတ်တန်းစားမိသားစုကနေလာပါတယ်။ တကယ်တော့သူသည် Palmieri နာမည်ကသာဘောလုံးကစားသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသူ့မိသားစုမှာဘောလုံးပြေးပုံပေါ်ပါတယ်။
လက်ရှိသူတို့ရဲ့နံပါတ်6အဖြစ်ဘရာဇီး Fluminense များအတွက် play အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကကဲ့သို့တူညီသောမိဘများ၏မွေးဖွားအီမာဆန်ရဲ့အစ်ကို Giovanni ။ သူလည်းတစ်ဦးဘယ်ဖက်-ကျောအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဘရာဇီးကလပ်နှင့်အတူနီးပါး 100 ပွဲတက် racked ခဲ့သည်။
အထက်ပုံ Giovani ကသူ့ဆိအစ်ကိုထက်ငါးနှစ်အဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိမိအပုံစံ
Emmer အနေနဲ့အလွန်အမင်းစွယ်စုံဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်။ သူကဖြစ်စေဘယ်ဘက်ကိုပြန်သို့မဟုတ်လက်ဝဲ-တောင်ပံရာထူးမှာကစားနိုင်ပါတယ်နှင့်ပင်ရိုးမားမှာမိမိအချိန်ကာလအတွင်း Right-နောက်ကျောမှာဖြည့်ထားသည်။
အီမာဆန်ပင်နောက်ခံလူအဖြစ်ရှေ့ဆက်ရဖို့ချစ်တော်မူ၏။ သူကအပေါ်ကိုယူပြီးနှင့်သူ၏ဆန့်ကျင်ဘက်လူကိုရိုက်နှက်အတွက်လည်းလူသိများပါတယ်။ ဤအဖြစ်စဉ်ကိုရှိသူ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အမြန်နှုန်း, လက်ကျန်ငွေနှင့် Samba-တူသော dribbling ကျွမ်းကျင်မှုဖော်ပြသည်။
5ft 9in မှာရပ်နေပေမယ့်လည်းသူ့အားသာချက်ကသူ့ဘောင်သုံးစွဲဖို့မကြောက်ပါပဲ။ အီမာဆန်ကသူ့ပရိယာယ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘက်မှပြင်ပမှ၏ပဒေသာဖြစ်စေတဲ့နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
လယ်ပြင်၏အခြားအဆုံးမှာ Emer သည်သူ၏အရှိန်အဟုန်ကိုကျေးဇူးတင်လှည်အခြေအနေများထဲကသူ့ကိုလာပြီတဦးတည်း-on-one အခြေအနေများတွင်လည်းကောင်းလှ၏။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှလာမယ့်မီ, ကနေကသူ၏ကာကွယ်ရေး stats စီးရီးအေအေမှာအကောင်းဆုံးနှင့်အတူလိုလိုလားလားတက်ကိုက်ညီ
အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေး
အီမာဆန်ဟာ 17 တောင်အမေရိကလက်အောက်တွင်-2011 ဘောလုံးချန်ပီယံရှစ်စဉ်အတွင်းနှင့်ယခင်၏ချန်ပီယံသရဖူရရှိခံရ 17 ဖီဖာဦး-2011 ကမ္ဘာ့ဖလား, စဉ်အတွင်းအောက်မှာ-17 အဆင့်မှာဘရာဇီးကိုယ်စားပြုသည်။ သူ 16 မတ်လ 2011 အပေါ်ချီလီဆန့်ကျင်နေတဲ့ရည်မှန်းချက်သွင်းယူ, နှစ်ဦးစလုံးပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းတစ်ဦးအငြင်းပွားဖွယ်မရှိ starter ဖြစ်ခဲ့သည်။
မတ်လ 2017 ခုနှစ်တွင်, အီတလီနိုင်ငံသားလေးလည်းနီးစပ်သူဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်အီမာဆန်သတင်းများအရအီတလီအားမိမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသစ္စာ switching ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူအီတလီနည်းပြ Gian Piero Ventura အားဖြင့် လိုက်. ခဲ့သည်။ သူက switch ကိုမတ်လ 29 ၏ 2017th နေ့၌လာ၏အိပ်မက်မက်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမာဆန် Palmieri ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
Daniele Rugani ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Federico Chiesa ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Lorenzo Pellegrini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Federico Bernardeschi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Domenico Berardi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Gianluigi Donnarumma ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မော Keane ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Nicolo Zaniolo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Giorgio Chiellini ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Lorenzo Insigne ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Marco Verratti ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်